पाँच विधामा १४ वन संरक्षणकर्मीलाई पुरस्कारको घोषणा - Nature Khabar Complete Nature News
सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा सरकारले विभिन्न वन समूह र व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने भएको छ ।‘सामुदायिक वनको पहिचान, संघीयतामा समृद्धिको अभियान’ भन्ने नाराका साथ सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस शुक्रबार मनाइँदै छ।
दिवसकाे पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार वन तथा भू–संरक्षण विभागले वन प्राविधिक संघ, फरेष्ट एक्सन, कफ्सन, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका सरोकारवालाको सहकार्यमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको छ।वन विभागले बिहीबार पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया गरेर३ दिनसम्म दिवस मनाइने जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित तत्कालीन ठोकर्पा पञ्चायत -हाल सुनकोशी गाँउपालिका १, २ र ३) लाई वन संरक्षण, सम्वर्धन र विकास सहित व्यवस्थापनको निमित्त वि.सं. २०३०-४-२५ मा सरकारी स्तरबाट परीक्षणको रूपमा २ वर्षको लागि सुम्पिएको दिनबाट स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुरु भएको हो । वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वनको अवधारणालाई कानुनी रूपमै स्थापित गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अधिकार सम्पन्न बनायो ।
वन विभागका अनुसार सामुदायिक र निजी वन संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका समूह र व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गरी सम्मान गर्न लागिएको हो । विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्सालकाअनुसार ५ पाँच विधामा१ १४ वटा पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको हो ।
विभागका अनुसार गणेशमानसिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ चार, कवुलियती वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ तीन, निजी वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ चार, साझेदारी वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ एक र सामुदायिक वन पत्रकारिता पुरस्कारतर्फ दुई जना पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसअनुसार गणेशमानसिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ पाल्पाको अंधेरी छरछरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह प्रथम भएका छन् । यो संस्थालाई नगद एक लाख रुपैयाँ राशीको पुरस्कार दिन लागिएको हो । यस्तै दोस्रोमा अर्घाखाँचीको घिरीखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भएको छ । यो संस्थालाई ७५ हजार, तृतीयतर्फ कपिलवस्तुको विरपुर जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भएका छन् । यो संस्थालाई ५० हजार र सान्तवनातर्फ मोरंगको हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र नवलपरासीको धुसेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भएका छन् । सान्तवनामा परेका दुवै संस्थालाई २५/२५ हजार नगद पुरस्कार दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै कवुलियती वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ पाँचथरको ठाडो नागी कवुलियती वन समूह प्रथम भएका छन् । यो संस्थालाई एक लाखको पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ । यस्तै दोस्रोमा नवलपरासीका सितलपोखरी कबुलियती वन समूह परेका छन् । यो संस्थालाई ७५ हजारको पुरस्कार, तृतीयमा प्युठानको हार्वुङ्गदीप कवुलियती वन समूह परेका छन् । यो संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँ राशिको पुरस्कार दिन लागिएको छ ।
त्यस्तै निजी वन राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ झापाको दुर्गाप्रसाद प्रसाई प्रथम भएका छन् । प्रसाईलाई ७५ हजारको पुरस्कार दिने भएको छ । यस्तै दोस्रोमा कैलालीका मुकुन्द पाण्डे परेका छन् । उनलाई ५० हजार, तेस्रोमा इलामका रघुनाथ तिम्लिसिना परेका छन् । उनलाई ३० हजार रुपैयाँको पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको छ । यस्तै सान्तवनातर्फ मोरंगका अंशु, युयुत्सु वन्जारा र खोटाङका सिताराम राई परेका छन् । सान्तवना हुनेलाई १५/१५ राशीको पुरस्कार दिइनेछ ।
यस्तै साझेदारी वन राष्ट्रिय पुरस्कार यो बर्ष कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई दिन लागिएको छ । पुरस्कारको राशी ५५ हजार पाँच सय ५५ छ । महानिर्देशक लम्सालकाअनुसार नेपालपछि सामुदायिक वन लागु भएको भियतनाम र चीन आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा निक्कै फड्को मारिसकेको छ । तर नेपाल अहिले पनि निक्कै पछि परेको छ ।
वनको बिषयमा निरन्तर रूपमा कलम चलाउँदै आएका कान्तिपुरका अब्दुल्ला मियाँ र गोरखनापत्रका धनकुट्टा सम्वाददाता कोकिला भण्डारीलाई सामुदायिक वन पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको छ । दुवैजना पत्रकारलाई २५/२५ हजार राशीको पुरस्कार दिन लागिएको छ ।करिब १० वर्षको अनुभव पश्चात् वि.सं. २०४६ मा सुरुभएको दीर्घकालीन वन विकास गुरुयोजनामा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम वनक्षेत्रकै सबभन्दा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा स्थापित भएको छ ।
पुरस्कारको विवरण यस्तो छ :